Parts Telecom Die Casting - Parts Telecom Custom - Casting Minghe
Vahaolana amin'ny telecom amin'ny alàlan'ny fanodinana & Cnc Machining
IATF 16949 MANKATSITRA CAST TRANO SY FANAMARIHANA CNC ho an'ny fizarana TELECOM
Ny singa ao amin'ilay rafitra dia azo fintinina ho sokajy telo, dia ireo fitaovana enti-miasa lehibe telo an'ny rafitry ny fifandraisan-davitra, fitaovana fampitaovana ary fitaovana fanovana. Ny rafitry ny fifandraisan-davitra dia misy fitaovana sy rindrambaiko, ao anatin'izany ny fitaovan'ny terminal, ny fitaovana fampitaovana ary ny fitaovana fanovana. Ny rafitry ny fifandraisan-davitra dia fanangonana fitaovana fifandraisan-davitra mifandrindra isan-karazany.
Ny rafi-pifandraisan-davitra tsotra indrindra dia rafitra iray namboarina natsangana teo anelanelan'ny mpampiasa roa, raha ny rafitra sarotra kosa dia rafitra noforonin'ny tambajotram-pifandraisana maro hafa niova foana hanome fantsona amin'ny antso iray. Ny rafitra tsotra sy sarotra dia azo soloina modely mitambatra.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny tambajotram-pifandraisana data, ny tambajotram-pifandraisan-davitra amin'ny solosaina dia nivoatra tsikelikely ho ivon'ny tambajotra. Ny tambajotram-pifandraisana solosaina mahazatra dia mizara lojika ho subnet mpampiasa sy subnet fifandraisana. Ny subnet mpampiasa dia manondro ny fanangonana ny teboka farany (ao anatin'izany ny fitaovan'izy ireo rehetra) sy ny rohy mampifandray ireo teboka ireo, ary ny fitaovana manokana Misy mpampiantrano, mpanara-maso terminal, terminal sns sns. ny subnet fifampiresahana dia manondro ny fanangonana ireo teboka fitaterana rehetra sy ireo rohy mampifandray ireo node ireo. Ny fitaovana manokana dia misy ny processeur node, ny rohy fandefasana ary ny rindrambaiko fifandraisana.
Mifandraisa aminay ny injenieran'ny telecom anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1. Fampiharana Components Telecom mahazatra.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny vahaolana maty paika ary ny famahanana cnc ho an'ny fampiharana telecom isan-karazany, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
Mpifantoka / mpanara-maso ny terminal
Misy hubs, repeater, tetezana, switch, router ary vavahady ary fitaovana fampifandraisana tambajotra hafa
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa Telecom Parts
Minghe dia manana traikefa mihoatra ny 30 taona manampy ireo mpanamboatra telecom hamorona singa mekanika mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy milina fanodinana 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny sasany amin'ireo fizarana Telecom mitaky faran'izay mafy indrindra amin'ny resaka volume, ampahany habe ary fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma amin'ny famaritana kalitaon'ny Telecom.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, manana ny fahaizany manamboatra ampahany amin'ny Telecom Parts amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny faritra kely ka hatramin'ny trano lehibe.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra Telecom manokana
Cnc Machining Telecom faritra
Fizarana Telecom Casting Investment
Fitaovana fanariana fasika amin'ny fasika
4.Ny fahafahan'ny famokarana mazava ho an'ny faritra Telecom
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ihany koa ny milina CNC, fanodinana famatsiam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ireo faritra telecom namboarina.
Fitaovana fanariana maty ho an'ny faritra Telecom:
Ny fahaizan'ny famitana ny telecom:
Fomba fanamboarana telecom isan-karazany:
Machining Telecom Machining sy Fahafatesana manaparitaka fampiharana:
Misy hubs, repeater, tetezana, switch, router ary vavahady ary fitaovana fampifandraisana tambajotra hafa;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe an'ny faritra Telecom
Safidio ny Serivisy fanariana telecom tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny telecom casting dia manondrana any Etazonia, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerana an'izao tontolo izao. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana faritra telecom anao.